Kiddie Ride, Kid Games Machine, Onyinye Egwuregwu Egwuregwu - Meiyi
Guangzhou Meiyi Electronic Technology Co., Ltd. hiwere na 2014, dị na Panyu Guanghzhou, isi obodo nke egwuregwu egwuregwu na China. Anyị bụ ndị ọrụ ngwá ụlọ ọrụ na-elekwasị anya onwe ha, nnyocha, mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. The factory-ekpuchi ebe ndị 1500 square mita, nwere 3000 square ngosi ụlọ nzukọ, Anyị isi na ngwaahịa na-agụnye mkpụrụ ego….
Ọrụ Pụtara High Quality
Igwe ihe nrite
Egwuregwu egwuregwu igwe
Simulator agbapụ egwuregwu
Igwe egwuregwu Arcade
Agbapụ bọl egwuregwu
Egwuregwu tiketi lọtrị
Egwuregwu mkpụrụ ego ego
Kpachara Anya Ma Nọgidesie Ike
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị raara onwe anyị nye maka ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche. Anyị na-elekwasị anya bụ na R&D, n'ịhụ na anyị na-enye ndị ahịa anyị na top àgwà na otutu ngwaahịa.
Anyị nwetara ezigbo aha n'etiti ndị ahịa anyị .Anyị ga-achikota ahụmịhe na-aga nke ọma, na-eduga ejiji, na ihe ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ iji mepụta ngwaahịa ndị pụrụ iche.
Na ezigbo azụmaahịa, ezigbo ahịa ahịa, ndị ọrụ anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ụlọ ọrụ a na-agbasi mbọ ike idozi nsogbu ndị ahụ ma nweta afọ ojuju kachasị elu nke ndị ahịa.
Anyị na-atụ anya na-ekwenyere ndị ọzọ ahịa n'ụwa nile maka nkịtị mmepe na ibe uru. Welcome OEM & ODM iji na onye nkesa si n'akụkụ ụwa nile ileta ma na-akwado anyị!
Ntuziaka Blog na ntaghari ohuru
20-12-15 / site ha
-Esi mee ka umuaka gi ogige ntụrụndụ mor ...
1. styledị Okwu E nwere ụdị isiokwu dị iche iche nke ụmụaka ji egwuri egwu, nke ọma, dịka oke osimiri, oke ọhịa, swiiti, oghere, ice na snow, katuunu na ihe ndị ọzọ. Tupu ịchọ mma, a ga-enyocha echiche na nyocha zuru ezu iji chọpụta ụdị ụmụaka ...
Gini mere igwe eji eme doll ji ewu ewu?
Igwe ihe eji eme doll na ụdị igwe onyinye dị ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile. Na mgbakwunye na ụlọ ahịa igwe anaghị agba nchara, ha nọ n'akụkụ warawara ụlọ ahịa, n'akụkụ sinima, na warara nke ụlọ ahịa akwa ụmụaka ma ọ bụ ụlọ nri, na n'ọnụ ụzọ bouti ...
New World International Mgbakọ na Ex ...
Na November 28,2020 ， 13th Zhongshan Amusement Fair China emere na Zhongshan Expo Center / New World International Convention and Exhibition Center. Na November 28,2020 ， nke 13 nke Zhongshan International egwuregwu & Amusement Fair China (Zhongshan) International Culture and Tourism Industr ...